Ezinamacala Wire Mesh, Intulo Nail, lashukumisa Ukhonkolo Nail - YouYou
insingo blade wire
Izitadi ze-DRYWALL seziye zaba ngumlingo futhi zinde kancane empilweni yethu yansuku zonke. Zazisetshenziswa ekwakhiweni kwezezindlu ezisezingeni eliphezulu nobunjiniyela, kepha manje futhi zingenye zezinto zokwakha ezisetshenziswa kakhulu, ngokwesibonelo, kufanele silungise izinto empilweni yethu yansuku zonke. Ezintweni ezihleliwe ngaphambi kokwenza n ...
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe, imigqa ehlanganisiwe eminyakeni yamuva inokuthuthuka okusha, umugqa ohlanganisiwe ukuvela kohlelo lokuthola kabusha imfucuza, nakweminye imigqa yokukhiqiza. Isithando somlilo esine-tube ekhazimulayo engashisi ngokushisa okungaqondile, uphethiloli oshiswa yishubhu elikhazimulayo ushisa g ...
Inqubo yokukhiqizwa kwe-Nail idweba ikakhulu, isihloko esibandayo, ukupholisha nezinye izinqubo. Izinto zokukhiqiza izipikili kungu-disc, okungukuthi, idiski yensimbi, ngemuva kokudweba ucingo, ukhiphe ububanzi be-Nail Rod, bese ngemuva kwesihloko esibandayo, umsila wezipikili nethiphu, bese upholisha, lokho kusho ukuthi ...